IFTIINKACUSUB.COM: Qiso yaableh: Dawlad ka werwersan cimri dherarka dadkeeda oo sii kordhayaa!
Qiso yaableh: Dawlad ka werwersan cimri dherarka dadkeeda oo sii kordhayaa!
Iftiinkacusub.com: Cimri dhererku waa waxa kaliya ee Aadanahu isku wada raacsan yahay in uu yahay wax wanaagsan,qofkasta oo nooli ,waxa uu jeclaan lahaa in Dunidan loo daayo ,oo aanu waligiis laga kaxaynin ama aanu ka dhimanin.
Soomalidu waxa ay ku ducaysataa Ilahayoow cimriga noo dheere,taas oo ay uga jeedaan rabitaanka iyo jacaylka ay u hayaan in ay dunida waxbadan si joogaan,balse ma la socotaa oo ma og tahay, in Dalka Jabaan madaxdeedu ay aad uga xunyahiin cimri dheerida dadkooda oo sii siyaadaysa.
Waxa ay ahayd in ay ku farxaan,hadiiba ay dadkoodu wakhti badan cimrigoodu sii jiraayo,balse waxa ay ku doodayaan ,wakhtigaasi dheer ee ay dadku noolanayaan ee aanay hore u dhimanaynin,waxaa hoos u dhacaaya oo khasaare ku imanayaa dhaqalahii dalka.
Japaan iyo qayrkood toona ma aamin sana ,in Ilahay SW uu isagu Dunidan maamulo,isla markaana uu jaan-gooyo ,waxkasta oo noole ah oo Dunida korkeeda jooga ama ku nool.
Dalka Jabaan ayaa waxa uu ka mid yahay ,wadamada aanay dadkoodu hore u gaboobin,iyada oo dadka Reer Jabaan lagu qiyaaso in ay gadhaan cimri ahaan 100-120 sano,halka ay dawladaha Afrika dadku ay ku idladaan wax ka yar 70 sano.
Dadka iyo Hay'adaha iyagu aqoonta dheeraadka ah u leh korodhsiimada iyo cimri-dhererka Ibna-aadmiga, ayaa waxa ay soo sareen wakhti hore ,qoraal cadaynaaya in dalka Jabaan sanadka 2050 ,dad lagu qiyaasay Hal Milyan oo qof ay Boqol jirsan doonaan, isla markaana aanay gaboobi doonin,warbixintaasi oo dhamaan dawlada Japaan warwar ku abuurtay kana cadhaysiisay.
Cimriga iyo da'da uu qofku gaadhi doono Ilahay ayuunbaa og , hadana caqliga iyo saadaasha dadka arimahan aqoonta u lihi waxa ay cadaynayaan, in cimri dherarka qofka ay ka qayb qataan, hadba cuntooyinka uu isticmaalaa caynka ay yihiin iyo Jimicsiga uu sameeyo.
Wakhtiyadii hore dawlada Dalka Japaan waxa ay siin jirtay dadka cimrigoodu 100 sano uu gaadho,hadyad ka samaysan Qalin suuradiisu u eegtahay ama ay ku xardhan tahay waxyaabo ka turjumaaya Farxad.
Hadaba wakhtigan xaadirka ah markii ay bateen dadkii iyagu cimrigoodu gaadhay ama oo ka kordhay 100 sano,ayaa waxa ay dawladu Abaal-marintii ka dhigtay mid ka yar intii hore,sababta oo ah ayay yidhaahdeen, dadkii oo intii ay markii hore ahayeen kasii batay,gaadhayna tiro 20,000 Kun oo Qof iyo in ka badan.
Markii baadhis lagu sameeyey ,waxyabaha sababta u ah in dadkan reer Japaan cimrigoodu 100 sano iyo in ka badan in uu gaadho ,ayaa waxa la ogaaday in ay yihiin dadka Dunida ugu cususta badan Kaluunka ama waxa loo yaqaano Malayga.
Guntii iyo gaba-gabadii ,hadaynu nahay Soomali ,sidee ayay inoola muuqataa in ay dawladi ka xumaato cimri dhererka dadkeeda ,iyada oo ka fikiraysa dadkaasi wixii ay cuni lahayeen iyo dhaqalahii ku bixi lahaa ,wakhtigaasi dheer ee ay jiri doonaan, iyaga oo dadkaasi ahaa kuwii markii hore dalkooda iyo dadkoodaba soo dhisay.
Hadii aynu nahay dadka Soomalida ,sidee ayay kuula muuqataa, haddii maanta dhul yawga ay dadka Soomalidu ay degan yihiin , dawladaha ka jiraa ay soo saraan amaro iyo qawaniin mamnuucaysa in cimri-dhereka dadka uu yahay mid xaraan ah.
Waxyaabaha kale ee iyaguna dunida layaabka ku ah ayaa waxa ka mida,in dawladaha qaar ay soo saraan qoraalo iyo cadaymo ay ku muujinayaan, in dalkoodu uu yahay mid aanay dadkiisu aanay dhimanin,taasi oo ay uga jeedaan in 80% ay dadkoodu cimri ahaan ay gadhaan 100-120 sano ,taasi oo ay u arkaan in ay tahay dhaqaale burbur dalka kusoo fool-leh.
Wadamada Dunida qaarkood dadka ku nooli , waxa ay la cimri yihiin nolosha Sadax qof oo Soomali ah,waxa aad arkaysaa qof cimrigiisu uu yahay 120 sano ama uu ka badan yahay,oo hadana ka xoog badan labaatan jirka Soomalida.
Hadaba maxay ayaad is odhan kartaa ,hadii dawladaha qaar maanta ay ka qaylinayaan dadkayagii ayaa cimrigoodu dheeraaday,qaarkalana ay ku doodayaan waxaa nagu yaraatay dadkii dhimanayey,maxay ayaad Soomalida u malaynaysaa oo iyada Dhimashada,cudurada,Gaajada,darxumadu ay dugaashatay dockastana ay uga wareegtay.
Inkastoo aynu nahay Dad Muslim ah,aamin sanahayna in qofna aanu dhaafayn xiligii loogu talagalay Gabaw iyo Geeriba,hadana saw kulama fiicna in aynu dadkaasi dhinaca aqoonta iyo caafimaadka aynu kaga dayano dawladahaasi,si ay u yaraato waxyaabaha keenaaya in nolosheenu kusoo koobnaato 60-70 sano.
Islaamka laftiisu waxa uu aamin san yahay, in Cuntooyinka iyo hadba inta uu qofku jimicsi sameeyaa ay qayb laxaadle ka tahay caafimaadka jidhka,Sadaqada iyo xidhiidhinta ehelka oo la joogteeyo ,ayaa iyada lafteedu qayb ka qaadata cimri dhererka sida uu Nabigeenu CSW uu inoo sheegay.
Balse inaga intaasi oo nafaqo xuma ah waxaa inoo Dheer ,Qaad aynu nolosheenii uu dhan ku baabiinay inaga oo aan haysan cunto inagu filan oo nafaqo leh.
W/Q: Khadar Ibrahim Aar.
Hal-abuur siyasadeed oo kusoo wajahan Xisbiga UCID...
Maxkamada sare ee ciidamada oo mar kale xukun dil ...
Sweden waa wadanka ugu Diimaha neceb Aduunka!
Maxay u dhimataa Shinidu marka ay wax qaniinto?
Maxay Diintu ka qabtaa banaanbaxa ama mudaharaadka...
Habka loola dagaalamo Musuq-maasaqa!
Qiso yaableh: Qashinka aanu ku tuurno wadooyinkaya...
Cabdi Idaan Faarax IHN waxa uu yidhi:Shan Soomali ...
Qiso yaable: Qof Soomaliya oo laga soo saaray Kell...
Garta xeer-beegti Iyo xeerarka somalida.
Qiso yaabeh: Kun Like haddii aan la ii saarin ,Dab...
Qiso yaable: Yaa doonaaya in Caruur la siiyo?
Qiso yaableh: Gabadh qabtay xanuunka Qalalka oo wa...
Faallo: Distoorka Soomaliya wakhti intee leeg ayuu...
Qiso yaableh: Caruurtii ayaa iga gaajonaysa,waa in...
Qiso yaableh: Habaarkii Martida!
Nin dadkiisii baafinaaya: Waxaan jeelka Itopiya ga...
Qiso yaableh: Dawlad ka werwersan cimri dherarka d...
Qiso yaableh: Gabadh ayaan ahay Curyaamad ah,balse...
Layaabka Dunida: Sababtii loo dilay Lixdii nin ee ...
Sheekh Fatfooday in Dumarku ay garaaci karaan Rago...
Waa maxay Sababta goobaha caafimaadka ay Raggu ugu...
Qiso yaableh: Daawo dhaqameedka ayaan kaga kalsoon...
MAANTA WAA BERRIDII AAN SHALAY KUU SHEEGAY !.
Qiso yaable: Suufi sheegay in uu helay Jab dhagax ...
Lixdankii ilaa maanta dhaqanka Madaxda Somalidu is...
Facebook waxbarashadii dhalinyarada hoosbuu u dhig...
Qiso yaableh: Kaadidii Geela ee aan cabbay maxaan ...
Wali Miyaanad Xajin !!!
Saboolka iyo hodanka aduunka oo sii kala fogaanay...
Khadra Cumar Qardaas halyeeyed loo baahan yahay in...
Jaarka fiicani waxa uu ka qiimo badan yahay Inadee...
Qisso yaableh: Madaxwaynahii ku dhawaaqay in uu Il...
Boolis Lagu Rakibay Qalab haddii ay Laaluush qataa...
Waayaha nolosha-Aadamiga iyo garashadiisa.
Qooraayoow qoraalka aad qortaa yuu ku qiimo tirin....
Qisso yaableh, Qaybtii 2-aad :Adeer Kelli Midgaan ...
Afarta kooxood ee ay u qaybsamaan siyasiyiinta be...
Qisso yaableh: Adeer Kelli Midgaan Inantayda loo g...
Waa Maanso la magac baxday KU-TUNTUUNSO,waxaa tiri...
Qiso yaableh : Cidkasta oo wax Takoortaba iyana wa...
Qisso dhab ah: Nin jacaylka uu u qabo Xaaskiisa is...
Waa kuma ninka Xabashiga ah ee burburinaya Kacbada...
Qisso dhab ah oo dhacday: MIDGAHU Bakhti xooleed a...
"Waaryaahe Kediye! kobtani miyaanay ahayn kobtaynu...
Haddii aad rabto isbeddel, horta adigu isbadan.
Qisso yaab leh: Xamar ayaan tegay la'imana xidhin ...
Aragti si cilmi ah u sharaxaysa Biyo la'aanta (Wat...
Qisso yaab le: Ma jecli Aabo in laba Nin anoo qaaw...
Ganacsade Xaaji Gaabow oo Lix Wiil ee uu dhalay ma...
​Hadii daacad nimo la doonaayo ,Madaxwayne kasta w...
Gumaysigiiba haddii aanu tegin maxaa loo xusayaa ...
AKHRISO:-Liiska Xabsiyada Ugu Xun Addunka (Saw)
Waa in uu Qoslaa Qof Kasta oo Neyjeeriyaan ahi.
Waxaa Geeriyooday Caalimkii waynaa ee umada Soomal...
Cabdilaahi Suldaan Timacadde oo Somaliland u dooda...
Ma taqanaa Xus Diimeedyada Ugu Layaabka Badan Duni...
Qisso yaab leh: Xigmadda ay leeyihiin dadka dhimir...
Miyaa la Inqilaabay shirkii Somaliland iyo Khaatum...
Mataqanaa cabirka Albaabka Janadu inta uu leeg yah...
Gaarriyoow ma' iishoow, Uf qabiilkii aad tidhi, Ha...
“Xilka qaranku meherad laga taajiro maaha, waa mad...
Gabaygan la magac baxay (MALASHAXAN)waxaa tiriyey ...
Maxaa keena Toxobta Madaxa iyo Timaha?
Qisso yaab leh: Waar Khamiiskii halkeed kaga timi?...
Maxaynu uga faanaa in aynu magac-yadeenna Far Soo...